तपाईको घरमा बच्चा छ ? यो कुरा तपाईले जान्नैपर्छ... | Nepalese.org - No. 1 News Portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actoress, Audio, Video, Interview
तपाईको घरमा बच्चा छ ? यो कुरा तपाईले जान्नैपर्छ…
पछिल्लो समय आएको एक अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार भारतमा करिब १ दशमलव ६ प्रतिशतदेखि १२ दशमलव २ प्रतिशतसम्म बच्चामा ध्यानको कमी भएको पाइएको छ । नेपाल र भारतबिच धेरै कुरा मिल्ने हुनाले नेपालमा पनि यस्तो अवस्था छ भन्न सकिन्छ ।
बच्चाहरुमा ध्यान नपुर्याउँदा अटेन्सन डेफिसिट हाइपर एक्टिभिटी डिसअर्डर अर्थात् ध्यानको कमी र अत्यधिक सक्रियता सम्बन्धी रोग लाग्छ । एडीएचडीको समस्या त्यस्ता परिवारमा बढी हुन्छ जहाँ तनावको वातावरण रहन्छ र पढाईंमा बढी ध्यान दिन जोड दिइन्छ ।
इन्डियन मेडिकल एशोसिएसन (आईएमए) का अनुसार, एडीएचडीको समस्या प्रायजसो प्री स्कूल वा एलकेजीमा अध्ययन गर्ने बालबालिकामा बढी हुन्छ । केही बच्चामा एडीएचडीका कारण किशोरावस्थामा पुगेपछि समस्या आउन सक्छ । यस रोगको उपचारको विकल्पमा औषधि, मनोचिकित्सा, शिक्षा वा प्रशिक्षण वा यी सबैको मिश्रण हुन सक्छ ।
टिभी धेरै हेर्नु, गरीबी वा फुड एलर्जीले एडीएचडी हुँदैन । शिक्षा, समर्थन र रचनात्मकताले यस्ता बच्चामा एडीएचडी हुनबाट रोक्नमा धेरै सहयोगी हुन्छ । यद्यपि, एडीएचडी भएका बच्चासँग राम्रोसँग प्रस्तुत हुनु गाह्रो हुन्छ । तर, समयलाई प्राथमिकता दिँदै र प्रत्येक काम समयअनुसार गर्नाले स्थिती नियन्त्रणमा ल्याउन मद्दत पुग्छ । आमा–बुबाले सँधै ध्यान दिनुपर्छ कि एडिएचडीले गर्दा कतै तपाईँको बच्चाको बुद्धि वा क्षमतामा कमी त आएको छैन । बच्चाको शक्तिको पत्ता लगाउनु र राम्रो परिणामका लागि उनको शक्ति र क्षमतालाई ध्यानमा राख्नु पनि जरुरी हुन्छ ।
एडीएचडी भएका बच्चाको ख्याल गर्ने उपाय
स्पष्ट रुपले काम गर्ने समय तालिका बनाउने । जसले गर्दा बच्चासँग कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने बारेमा सबैले थाहा पाउन ।
राम्रो काम गरेबापत समयसमयमा उनलाई पुरस्कार र उपहार दिनुपर्छ । बालबालिकाको राम्रो काम बापत प्रसंशा र सकारात्मक प्रतिक्रिया दिनाले व्यवहार राम्रो बनाउन सकिन्छ ।
बालबालिकाले आफूमाथिको नियन्त्रण गुमाउन थाले त्यसमाथि ध्यान दिने र उसलाई अन्य कुनै गतिविधिमा व्यवस्त बनाउने ।
बालबालिकालाई समाजमा वा स्कूलमा घुलमिल गराउन घरमै उसको साथीहरूलाई बोलाउने । तर, ध्यान दिनु पर्छ की उसले आफ्नो नियन्त्रण नगुमाओस् ।
आफ्नो बच्चालाई राम्रो निद्रामा सुत्न दिने । सुत्नु भन्दा पहिले उसलाई कुनै रमाइलो गतिविधिमा व्यस्त गराउने । – नेपालीपत्रबाट साभार